▷ Laptọọpụ kacha mma maka ndezi vidiyo nke 2022
Enwere ọtụtụ ndị, n'ihi nsogbu ọrụ, kwesịrị ịrara onwe ha nye ọtụtụ awa nke ndezi vidiyo. Maka ọrụ dị otú a, anyị chọrọ laptọọpụ na-emezu ọtụtụ ihe achọrọ, ya mere, ebe a anyị ga-enyere gị aka ịhọrọ Laptọọpụ kacha mma maka ndezi vidiyo.
Nke a bụ ụfọdụ ụdị nke obere maka edezi vidiyo nke ahụ nwere ike ịmasị gị ma nwee ike ịrụzu ọrụ a nke ọma mgbe niile:
1 Ntụle nke laptọọpụ maka ndezi vidiyo
2 Laptọọpụ kacha mma maka edezi vidiyo
2.2 MSI nke oge a 14
3 Ụdị laptọọpụ maka ndezi vidiyo
3.1 Onu ahia
3.2 Maka ndezi vidiyo 4K
3.3 Maka ndezi vidiyo ọkachamara
3.4 Iji dezie vidiyo GoPro
4 Atụmatụ nke laptọọpụ kacha mma iji dezie vidiyo ga-enwerịrị
4.5 Ihuenyo (nha na mkpebi)
4.7 Onwe ya
4.9 Ọdụ ụgbọ mmiri na njikọta
5 Ego ole ka laptọọpụ maka ndezi vidiyo ga-eri gị ma ị dezie na:
6 MacBook Pro ọ dị mma maka idezi vidiyo na foto?
Ntụle nke laptọọpụ maka ndezi vidiyo
Laptọọpụ kacha mma maka edezi vidiyo
Ndị MacBooks Pro bụ kọmpụta kacha mma maka ndezi vidiyo. Ihe nlereanya a nwere a 16 inch nha ihuenyo. Ọ bụ ihe ngosi Retina, nke nwekwara teknụzụ True Tone. Maka onye nrụpụta, a na-eji Intel Core i7 ọgbọ nke itoolu. Ọ na-abịa n'akụkụ eserese Radeon Pro 5300M nwere 4 GB nke ebe nchekwa vidiyo yana Intel UHD Graphics 630 Graphics.
Laptọọpụ a na-eji nchekwa n'ụdị SSD, yabụ anyị nwere nnukwu ọsọ n'ihe gbasara ọrụ. Ọ nwere ikike nke 512 GB. Laptọọpụ ahụ nwekwara ọdụ ụgbọ mmiri anọ nke Thunderbolt 3 (USB-C), nke na-enye anyị ohere ijikọ ngwa ngwa ndị ọzọ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na ya. Na mgbakwunye, ọ nwere Touch Bar na Touch ID dị.
Ọ bụ otu n'ime nhọrọ zuru oke ma rụọ ọrụ nke ọma ọ bụrụ na anyị na-achọ laptọọpụ edezi vidiyo taa. Anyị nwere ike ịtụ anya ịrụ ọrụ dị mma yana interface na-eme ka ọ dị mma ka ọ nwee ike dezie vidiyo na ya.
MSI nke oge a 14
MSI bụ akara anyị maara maka ya egwuregwu laptọọpụ, mana o nwekwara ụdị anyị nwere ike iji maka ndezi vidiyo. Laptọọpụ a nwere nha ihuenyo inch 14, na Full HD mkpebi. N'ime ya, ihe nrụpụta Intel Core i7-1165G7 na-echere anyị. Na mgbakwunye na ịnwe 16 GB Ram, dị mma maka ịrụ ọtụtụ ọrụ n'otu oge.
Maka nchekwa ọ na-eji a SSD nwere ikike nke 512 GB. Eserese anyị na-ahụ na ya bụ eserese Intel agbakwunyere. Jiri Windows 10 Home Plus dị ka sistemụ arụmọrụ. Yabụ na ị gaghị enwe nsogbu mgbe ị na-eji nke a msi laptop.
Ọ bụ ezigbo nhọrọ maka ndị na-achọ laptọọpụ maka ndezi vidiyo. Ọ nwere ihe nrụpụta dị ike, nwere ikike RAM dị mma ma na-eji SSD nwere ọtụtụ ohere nchekwa. Ọ bara uru iburu n'uche.
Nke atọ anyị na-ahụ nke a Laptop 15,6 inch nke nha. Ọ nwekwara mkpebi FullHD. N'ime ya anyị na-ahụ ihe nhazi Intel Core i5-1135G7, nke na-enye ya ike dị mma na ịrụ ọrụ dị mma n'oge niile, zuru oke maka idezi foto ya.
The processor na-abịa na 8 GB RAM. Na mgbakwunye, ọ nwere nchekwa na-enye 512 GB SSD, Ngwakọta dị mma na mpaghara a, n'ihi na ọ na-enye ohere dị ukwuu na anyị nwekwara ọrụ ngwa ngwa na mmiri mmiri mgbe niile. Eserese ọ na-eji bụ Intel Iris Xe.
E gosipụtara ya dị ka Laptọọpụ maka ndezi vidiyo dị ọnụ ala mana nke zuru oke na-adọrọ mmasị. Ihuenyo dị mma, ihe nrụpụta dị ike na nchekwa nchekwa dị mma, nke na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ na-adọrọ mmasị na mpaghara ahịa a.
Lenovo bụ akara Laptọọpụ kacha ere n'ụwa niile yana ha nwere oke dị iche iche, ebe anyị nwere ụdị mmasị. N'okwu a, anyị na-ahụ laptọọpụ a, yana a 13,9 inch nha ihuenyo, na 4K mkpebi. Ọ bụ ihe na-agbanwe agbanwe, nke anyị nwere ike ịgbaji n'otu ụzọ ma jiri ihuenyo mmetụ ya ma ọ bụrụ na ọ dị anyị mma karị.
N'ime anyị na-ahụ a Intel Core I7-8550U processor, nke na-abịa na 8GB RAM. Na mgbakwunye, ọ nwere nchekwa 512GB n'ụdị SSD. Ọ na-abịa na ihe ngosi Intel UHD. Ebe ị na-eji Windows 10 dị ka sistemụ arụmọrụ gị na nke a.
Ọ bụ laptọọpụ na-edezi vidiyo dị mfe, ma nke ahụ na-emezu ụdị ọrụ a nke ọma. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-adịghị na-edezi videos ọkachamara, ma ọ bụ ihe na-eme na ụfọdụ ugboro, ọ bụ ezi nhọrọ na-n'ime akaụntụ na nke a.
Ụdị laptọọpụ maka ndezi vidiyo
Maka ndị na-achọ ezigbo laptọọpụ maka ndezi vidiyo, ha nwere ike họrọ otu n'ime ndị a ìgwè nke laptọọpụ, dị ka mkpa nke ọ bụla:
E nwere ọtụtụ na-eme na ụdị nke ọnụ ala laptọọpụ nke enwere ike iji maka ndezi vidiyo, ọbụlagodi maka ndị na-arara onwe ha nye usoro a mgbe ụfọdụ ma ọ bụ dị ka ndị amateur. Kọmputa ndị a nwere ike ịnwe ọnụ ahịa dị n'etiti € 400 na € 600, yana ngwaike dị ntakịrị karịa, dị ka Acer Aspire 5 na Swift 3, ASUS VivoBook, ma ọ bụ Lenovo IdeaPad Flex 5, n'etiti ndị ọzọ.
Iji bụrụ ezigbo otu maka ọrụ a, ịkwesighi ịdaba n'ụdị njehie ụfọdụ nke ụfọdụ ndị na-eche nke ahụ Ihe kacha mkpa bụ CPU. N'oge usoro ọrụ na ngwanrọ na-edezi vidiyo na ntinye koodu, CPU na-arụ ọrụ kachasị, yabụ ị kwesịrị iche echiche nke ọma maka CPU dị ike, dị ka AMD Ryzen 5 o Intel Core i5 ma ọ bụ karịa. Ọ dịkwa mkpa ịnweta 8-16GB nke RAM, ihuenyo buru ibu na mkpebi dị mma (≥15.6 "na FullHD), na SSD (ọ ka mma ma ọ bụrụ na ọ bụ nnukwu ikike, ebe ọ bụ na vidiyo, karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụ mkpebi dị elu na àgwà dị elu). ọ ga-ewe ọtụtụ ohere) nke na-agaghị eme ka ọsọ nke ntinye koodu dịkwuo elu, ma ọ ga-enye ike dị ukwuu.
Maka ndezi vidiyo 4K
Ọ bụrụ na ịchọrọ laptọọpụ 4K video edezi, ị ga-achọ kọmpụta nwere njirimara akọwapụtara nke ọma yana arụmọrụ dị elu karịa ndị gara aga. Ndị otu ndị a, ka ha wee na-arụ ọrụ nke ọma. ha kwesịrị ịdị site na 800 ruo 1000 € odika, ma ị nwere ike họrọ akụrụngwa egwuregwu nke a haziri nke ọma na ihe achọrọ. Dịka ọmụmaatụ, dịka Dell G5, Lenovo Legion, ASUS ROG, MSI GL, HP EliteBook, wdg.
N'ụzọ doro anya, iji nwee ike dezie 4K video, ị ga-mkpa GPU na-akwado mkpebi a yana panel 4K iji hụ nsonaazụ ya. Ma ọ bụghị ya, njirimara nke akụrụngwa nwere ike ịdị ka nke akọwara na ngalaba akụrụngwa dị ọnụ ala ...
Maka ndezi vidiyo ọkachamara
para ọkachamara were, Ị nwere ike ịzụta laptọọpụ site na € 1000 gaa n'ihu, na-arụ ọrụ dị ịrịba ama nke na-enye gị ohere ịrụ ọrụ gị na arụmọrụ kachasị mma na ọbụna nke ahụ bụ ego na-adịgide adịgide dị mma maka ụlọ ọrụ gị, na-enweghị oge ochie na mgbanwe mbụ ma nwee ike ịkwado ya. ọbụna ọgbọ ọhụrụ edezi software.
N'okwu ndị a, ụfọdụ ụdị egwuregwu na-adaba na njirimara ndị a nwekwara ike ịrụ ọrụ. Ọ bụ ezie na ndị otu kacha akwadoro nwere ike ịbụ Dell XPS na G5, na MacBook Pro 16 ”, Alienware Mpaghara-51, Microsoft Surface Book 2, HP Specter x360 na ZBook, Lenovo ThinkPad X1, ASUS ZenBook, MSI, wdg. Ha niile nwere ogwe dị elu, CPU dị ike, GPU raara onwe ya nye dị elu, yana ikike dị ebube nke ebe nchekwa RAM na SSD.
Iji dezie vidiyo GoPro
Maka ịdezi vidiyo nke GoPro Ọ dịghị mkpa itinye ego dị ka nnukwu ngwá ọrụ maka ndị ọkachamara, ma ọ kwesịrị inwe ọtụtụ atụmatụ dị mkpa. Nke a na-amalite na laptọọpụ nwere ezigbo ihuenyo nwere mkpebi dị elu, CPU dị ike, yana nnukwu RAM na SSD.
Ụfọdụ echiche nke kọmputa ndị nwere ike ịkwanyere àgwà ndị a ùgwù nwere ike si na ụdị Dell XPS, site na HP Envy na Zbook, Acer Predator Helios, Lenovo ThinkPad, na ogologo wdg.
Atụmatụ nke laptọọpụ kacha mma iji dezie vidiyo ga-enwerịrị
Ọ bụrụ na anyị na-eme atụmatụ ịzụta laptọọpụ iji dezie vidiyo, ọ dị mkpa ịṅa ntị n'ọtụtụ akụkụ na ya. N'ụzọ dị otú a, anyị maara na anyị ga-azụta ihe dị mma nakwa na ọ ga-arụ ọrụ nke ọma mgbe nile maka ọrụ anyị chọrọ ya. Ihe ndị a bụ ihe ị ga-aṅa ntị.
The processor dị oké mkpa, anyị kwesịrị ka ọ dị ike. Iji mee nke a, anyị na-ele anya kpọmkwem ihe nlereanya, ọsọ elekere ya na ọnụ ọgụgụ nke eri nke ogbugbu. Data ndị a na-enye anyị ohere ịmata ma ọ bụrụ na anyị na-emeso onye nrụpụta nke ga-enye anyị arụmọrụ kwesịrị ekwesị maka ndezi vidiyo.
Ọtụtụ laptọọpụ na mpaghara a nwere Intel Core i5 ma obu a laptọọpụ nwere Core i7. Anyị nwekwara ike ịchọ ụdị nwere ibe ibe AMD Ryzen 5 y AMD Ryzen 7, nke ga-enyekwa nnukwu arụmọrụ na nke a. Dị ka anyị kwuru, ọsọ bụkwa ihe dị mkpa ma ọ bụ àgwà nke microprocessors.
Kaadị eserese NVIDIA bụ nke a na-ahụkarị na ahịa, ma e wezụga maka Apple laptọọpụ. Ọ bụ ezie na n'ihe banyere laptọọpụ maka ndezi vidiyo, anyị nwere ike inwe mmasị na kaadị eserese raara onwe ya nye, nke nwere nhazi ya na ebe nchekwa ya ma na-enye anyị ohere ijikwa ọrụ nke ọma n'ụdị ọnọdụ a.
Ọ bụrụ na anyị na-achọ aha kpọmkwem na mpaghara ndị a, nhọrọ dị ka NVIDIA Quadro ma ọ bụ GeForce GTX, AMD FirePro ma ọ bụ Radeon ha bụ ezigbo nhọrọ ịtụle. Ha ga-enye arụmọrụ achọrọ, na-enye anyị ohere iji ngwa na-edezi vidiyo na-enweghị nsogbu ọ bụla, na mgbakwunye na inwe ike ịgba ọsọ ọtụtụ n'otu oge n'ụzọ dị mfe.
E gosipụtara RAM dị ka ihe dị mkpa na nke a, nke anyị ga-achọrịrị. Ebe ọ bụ na ihe a na-emekarị n'ọnọdụ ndị a bụ na anyị ga-arụ ọrụ na ọtụtụ ngwa n'otu oge ma ọ bụ na nnukwu faịlụ. Ya mere anyị chọrọ RAM nwere ikike zuru oke nke mere na nke a ga-ekwe omume na-emeghị ka laptọọpụ ahụ kwụsịlata.
16 GB ga-abụ nke kacha nta na nke aN'ịtụle na ọtụtụ n'ime mmemme vidiyo ma ọ bụ foto ndị a na-ebuli RAM laptọọpụ. Ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na vidiyo na 4K, ọ ga-abụkwa na ị ga-ebugote na ihe nlereanya na 32 GB. Nhọrọ kachasị mma bụ mgbe niile ịnwe laptọọpụ iji dezie vidiyo na-enye gị ohere ịgbasa RAM kwuru. Ya mere, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ị nwere ike ime ya n'enweghị nsogbu ọ bụla ma zere nsogbu arụmọrụ.
Nke a bụ okwu dị mgbagwoju anya maka ọtụtụ ndị ọrụ. Ihe nkịtị bụ na ngwa ndị a na-ejedebe na-eweghara ọtụtụ ohere ma ọ bụ na faịlụ ndị anyị na-arụ ọrụ dị arọ. Yabụ na anyị kwesịrị ịnwe ohere nchekwa zuru oke na draịvụ ike. N'aka nke ọzọ, anyị chọkwara ka ọrụ ahụ dị ngwa ngwa ma dị nro. Yabụ na nke ahụ bụ arụmụka na-emebu n'okwu ndị a, n'agbanyeghị na anyị na-akwado ka ị nzọ na a laptọọpụ na SSD na otutu ikike.
Mana ọ bụrụ na mmefu ego bụ okwu, ụzọ kacha mma gị bụ ile anya Nchikota nke SSD na HDD na laptọọpụ a iji dezie vidiyo. Ọ ga-enye anyị ihe kachasị mma nke onye ọ bụla n'ime ha, na-ekwe ka anyị nwee ike ịrụ ọrụ nke ọma, na-eji ahụmahụ na-eji mmiri eme ihe, ma na-enweghị nchegbu n'oge ọ bụla banyere ebe nchekwa nke dị na laptọọpụ n'oge ahụ.
N'ụzọ dị otú a, anyị ga-eji SSD maka sistemụ arụmọrụ na ngwa, ebe anyị na-enweta ezigbo ahụmịhe onye ọrụ na ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma. Mgbe HDD anyị na-eji ya iji chekwaa faịlụ na faịlụ niile anyị ji arụ ọrụ na ngwa ndị a. Nchikota kacha mma na nke a, na-enye gị ohere ị nweta ihe kachasị na laptọọpụ a maka ndezi vidiyo.
Ihuenyo (nha na mkpebi)
Otu n'ime ihe ndị kacha mkpa n'ụdị akwụkwọ ndezi vidiyo a. O siri ike ịchọta ihe zuru oke, n'ihe gbasara nha, mkpebi ma ọ bụ agba. Nke a bụ ihe na-eduga ọtụtụ ndị ọrụ ịzụta ihe nleba anya mpụga, nke bụ ebe ha na-arụ ọrụ, kama ihuenyo laptọọpụ na ajụjụ.
Ogo ya dabere na laptọọpụ ọ bụla, ọ bụ ezie na ọ dịkarịa ala otu 15,6 nke anụ ọhịa ahụ laptọọpụ, na-arụ ọrụ na ụfọdụ nkasi obi. Ihuenyo buru ibu dị mma, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, nke ahụ ga-enye gị ohere ịhụ nkọwa nke ọma mgbe ị na-arụ ọrụ na laptọọpụ. Mkpebi ahụ bụkwa ihe dị oke mkpa na nke a, ebe ọ bụ na anyị kwesịrị ịrụ ọrụ n'ụzọ dị mma. Nkwado maka mkpebi 4K bụ isi na nke a.
Ọ bụ ezie na mkpebi nke ọ na-akwado ga-adabere na eserese ahụ nwee laptọọpụ a. Ya mere eserese dị ike na nke dị elu ga-eme ka anyị rụọ ọrụ nke ọma na nkwado maka mkpebi dị elu. Ya mere, anyị aghaghị iburu nke a n'uche mgbe anyị na-ahọrọ ihe nlereanya ọhụrụ na nke a.
Ọ bụrụ na ị ga-azụta ihe nleba anya mpụga, nha ga-adabere n'ihe ị na-ahụ nke ọma. Monitors na-amalite na 24 sentimita asatọ nwere ike ịdị mma maka ndezi vidiyo na foto. Opekempe, ha kwesịrị inwe mkpebi QHD (ntụpọ 2.560 x 1.440).
Enweghị ike ịghọta ndezi vidiyo na-enweghị ụda dị mma. N'okwu a, anyị nwere ike ịhụ na ụdị kọmputa ọ bụla na-azọ nzọ na ihe dị iche, ma n'usoro nke sistemu ma ọ bụ ngwanrọ. Ya mere ọ dịtụ ike iji tụnyere. Ihe dị anyị mkpa na nke a bụ nke ahụ ụda dị mma mgbe niile, nakwa ma ọ bụrụ na anyị na-eji ekweisi.
Ụda doro anya nke na-enye anyị ohere ịnụ ihe niile n'ụzọ zuru ezu na nke na-eme ka anyị na-arụ ọrụ dị mfe na nke a, mgbe anyị ga-edezi vidiyo na laptọọpụ. Ị nwere ike ịgụ ihe sitere n'aka ndị na-azụ ahịa, ka ịhụ ma ọ bụ ihe kwuru na laptọọpụ na-akwado ma ọ bụ na ọ bụghị nke ọma.
Otu akụkụ anyị na-atụle mgbe niile mgbe ịzụrụ laptọọpụ bụ batrị. N'ihe banyere laptọọpụ na-edezi vidiyo, enwere ọtụtụ ihe ị ga-atụle. Ọ bụghị naanị nha ma ọ bụ ike batrị bụ nkọwa nke ahụ masịrị anyị. Ọ bụ ezie na ọ bụ nkọwa dị mkpa, nchikota na processor bụ ihe na-agwa anyị ma ọ ga-enye ezigbo nnwere onwe.
Ndị nhazi ọhụrụ na ndị dị ike karị na-enwekarị nkwalite na-enye ohere ịrụ ọrụ ka mma, na obere ike oriri. Ya mere, ha na-enye gị ohere iji batrị dị ntakịrị, na-enye nnwere onwe dị mma. Ụdị nkọwa ndị a na-enwe mmetụta dị ukwuu, na mgbakwunye na ịgụ banyere echiche nke ndị zụrụ ma jiri ya mee ihe, nke nwere ike inye data a pụrụ ịdabere na ya.
Ọ na-adịkarị ka ụfọdụ akwụkwọ ndetu na mpaghara ahịa a buru ibu ma ọ bụ nwee arọ karịa nkezi laptọọpụ. Nke a bụ ihe na-egbochi oke ohere nke iburu gị ya ebe niile. Ọ dị mma ịlele ụdị akụkụ ndị a, karịsịa ibu o nwere, ma ọ bụrụ na ị nwere mkpa ka ị na-ebu ya mgbe niile.
Kechioma ha na-apụta obere laptọọpụ na obere arọ, na-akwụsịghị uru. Ọ bụ ezie na nke a bụ isi ihe, arụmọrụ ma ọ bụ njirimara ekwesịghị ịhapụ n'ihi na laptọọpụ dị ọkụ, ebe ọ bụ ihe anyị ga-atụfu.
Anyị enweghị ike ichefu ọnụ ọgụgụ ọdụ ụgbọ mmiri dị na laptọọpụ ahụ. Ihe dị mkpa, ebe ọ bụ na anyị ga-ejikọta ọtụtụ peripherals ma ọ bụ ihe nleba anya ọzọ. Ya mere, ọ dị mkpa ịnweta ntinye zuru ezu maka nke a, ka ha na-ekwe ka anyị na-arụ ọrụ mgbe niile.
Na nkọwapụta anyị nwere ike ịhụ mgbe niile ihe niile banyere ya, banyere ọdụ ụgbọ mmiri ndị kwuru na laptọọpụ nwere dezie videos. Ya mere, anyị maara tupu ihe anyị ga-atụ anya ya ma si otú ahụ họrọ otu nke dabara ihe anyị na-achọ dabere na ya. N'okwu ndị a, ọ ka mma ịnweta ọdụ ụgbọ mmiri ndị na-efu efu.
Ego ole ka laptọọpụ maka ndezi vidiyo ga-eri gị ma ị dezie na:
Otu n'ime nnukwu obi abụọ maka ọtụtụ ndị ọrụ bụ ego ole ka laptọọpụ maka ndezi vidiyo ga-eri. Enwere ọdịiche pụtara ìhè n'ihe gbasara ọnụahịa dabere na akụkụ nke anyị na-achọ kọmpụta kwuru. Ya mere, ọ dabere na mkpebi nke ị ga-edezi:
HD: Ha bụ ụdị dị ọnụ ala na akụkụ nke akwụkwọ ndetu maka ndezi vidiyo. N'okwu a, ị nwere ike ịchọta ọtụtụ nhọrọ maka ihe na-erughị 1.000 euro na ọnụahịa. N'etiti euro 600 na 900 enwere ụdị ole na ole dabara n'ihe achọrọ na nke a.
FULL HD: Otu ọkwa dị n'elu, nke nwere ike ịbụ akụkụ kachasị obosara ma ọ bụrụ na ị na-achọ laptọọpụ maka ndezi vidiyo. Ọnụ ahịa nwere ike ịdị iche n'etiti 1.000 na 1.500 euro n'ọtụtụ ọnọdụ. Ihe nkịtị bụ ịkwụ ụgwọ ihe dị ka euro 1.300 maka ezigbo laptọọpụ na nke a.
4K Laptọọpụ: Ụdị kachasị ọnụ, ọ bụ ezie na nke nta nke nta ọnụ ahịa dị na mpaghara a na-agbada, nke bụ ihe ọtụtụ ndị na-atụ anya ya. Ọ dị mfe ịkwụ ụgwọ ihe dịka euro 1.500 ma ọ bụ karịa maka laptọọpụ maka ndezi vidiyo 4K.
MacBook Pro ọ dị mma maka idezi vidiyo na foto?
N'ezie, ihe karịrị otu oge ị nụla nke ahụ MacBook Pro bụ nhọrọ kacha mma nke dị n'ahịa iji dezie vidiyo na foto. Nke a bụ nnukwu eziokwu, ebe ọ bụ na apple laptọọpụ A na-egosi ha dị ka ngwá ọrụ zuru oke maka ndị na-emepụta ọdịnaya, na interface ha na ekele maka ọrụ ha na-enye.
Ka oge na-aga, ọtụtụ ndị asọmpi apụtala na Windows, nke na-enye arụmọrụ dị mma yana nhọrọ dị mma maka idezi vidiyo na foto. Ka ọ were ma ọ bụrụ na-amasị gị iji Windows 10N'ihi na ọ dị gị mma karịa, enwere nhọrọ dị ukwuu na mpaghara ahịa a.
MacBook Pros ha ka bụ otu n'ime nhọrọ zuru oke na emebere ya nke ọma maka ọrụ ndị a. Ha dị ike, na ihuenyo dị mma na interface nke na-enyere aka na ọrụ ndị a, na mgbakwunye na ịbụ ìhè, nke doro anya na ọ na-eme ka ọ dị mfe iji ha mee ihe n'ụdị ọnọdụ dị iche iche.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Ịba uru » Enwere ike ibugharị maka ndezi vidiyo